Top 5 na-eweta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na Spain | Ozi ECommerce
Top 5 na-eweta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na Spain
Tupu mgbe ahụ, nkwakọ ngwaahịa bụ naanị ebe a na-edobe ngwaahịa a na-ezigara ndị ahịa ka ha wee nweta ya nke ọma dị ka o kwere mee. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ndị a na-aghọwanye ndị a ma ama.
Ugbu a, igbe, akpa na ụdị nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ na-ahazi dị ka azụmahịa si dị, ma ọ bụ ọbụna dịka ụdị onye ahịa nke ụlọ ahịa nwere. Enwere ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na Spain. Ma, n'ime ha niile, e nwere ọtụtụ ndị pụtara na ndị ọzọ. Ị chọrọ ịma ha?
1 Ndị na-eweta nkwakọ ngwaahịa kacha mma na Spain
1.4 Ka anyị kwakọba
1.5 Nkwakọ ngwaahịa Sago
2 Kedu ngwugwu kacha aga nke ọma na Spain
3 Ihe ị ga-achọ mgbe ị na-enye iwu nkwakọ ngwaahịa
Ndị na-eweta nkwakọ ngwaahịa kacha mma na Spain
Ọ bụrụ na ị nwere eCommerce ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ma ọ bụ na ị nwere ụlọ ahịa anụ ahụ mana site n'oge ruo n'oge ị ga-enye ndị ahịa gị ọrụ nnyefe ụlọ, mgbe ahụ ị ga-enwe mmasị ịmara ndị na-ebubata ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa dị na Spain. Kpọmkwem, ndị isi ise na-ahapụ anyị aha ndị a:
Vilapack bụ otu n'ime ndị na-eweta nkwakọ ngwaahịa na Spain nke anyị na-akwado. Na anyị na-eme ya n'ihi na nkwakọ ngwaahịa niile nke o nwere, nke dị ọtụtụ, na-elekwasị anya na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ị ga-enweta site na envelopu akwụkwọ, igbe, nkuku, akwụkwọ afụ, teepu nrapado ... Ma ihe dọtara mmasị anyị bụ na ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a bụ osisi, ma ọ bụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe, nke na-enyere aka na gburugburu ebe obibi.
Ọ pụtakwara n'ihi na ọtụtụ ngwaahịa na-elekwasị anya na ụfọdụ ihe omume. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere teepu nrapado ekeresimesi, ahaziri onwe ya, wdg. nke na-enyere aka ịnye ihe ngosi ka mma na ngwaahịa ndị ị na-eziga.
N'ikpeazụ, na mgbakwunye na ngwaahịa, kwa na-enye ọrụ dị iche iche dị ka ndụmọdụ na nlebara anya ahaziri onwe ya, ụgbọ njem ngwa ngwa, nrụzi na nrụzi, mgbazinye na mgbazinye, ma ọ bụ ohere nke inwe ihe karịrị 3000 nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa dị njikere mbupu.
N'okwu a, anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ nke e kere na 2009 na ebe ọ bụ na mgbe ahụ chọrọ ịnye ngwaahịa dị iche iche site na asọmpi ya, mgbe ọ na-enyere aka na gburugburu ebe obibi.
Ma ọ bụ na ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa nke ị nwere ike ịhụ na onye na-ebubata ya bụ ihe ndị sitere n'okike, nke na-adịghị egbu egbu na ihe ndị dị ndụ. O nwere ihe karịrị 3000 ngwaahịa na-adaba na mkpa mpaghara ọ bụla, gụnyere ụlọ ọrụ ile ọbịa.
Na mgbakwunye, ha bụ dị na agba dị iche iche na serigraph.
Nke kachasị mma, a na-emepụta ngwaahịa ndị ahụ na mpaghara ma ha nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ 15000 na ndepụta ha nke tụkwasịrị ha obi maka nkwakọ ngwaahịa.
Ndị ọzọ na-eweta nkwakọ ngwaahịa na 5 kacha elu bụ Cajeando. Ọ bụ ibe ebe ị ga-ahụ ụdị nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, ọ bụghị naanị igbe, kamakwa ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Ọ na-adọta uche n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ na-enye ihe oyiyi ka ị hụ, kamakwa vidiyo mmekọrịta, ntuziaka ịzụrụ, wdg.
Ozugbo ị banyere, ị nwere search engine nke ị nwere ike idowe nha ị chọrọ na ọ ga-enye gị nsonaazụ kpọmkwem. Ma, na mgbakwunye, ọ bụrụ na usoro ndị a pụrụ iche, ị nwere ike ịrịọ confection nke a na-akwa akwa site na ịhọrọ ọ bụghị naanị usoro, ma ụdị igbe, ọnụọgụ, agba, wdg. na n'ime naanị usoro ole na ole ị ga-enweta mmefu ego gị.
Dị ka ndị na-enye ndị ọzọ, ha na-enye nhọrọ ịhazi nkwakọ ngwaahịa ahụ.
Ka anyị kwakọba
Nke a bụ ihe ọzọ ndị na-enye anyị kacha amasị anyị n'ihi na ọ na-enye ngwọta zuru ụwa ọnụ, kamakwa ndụmọdụ onwe onye. N'okwu a, tupu ịzụrụ, ha na-akwado ịgafe ndụmọdụ a ebe ha na-ege ntị na mkpa nke ndị ahịa na, dabere na ha, na-enye usoro ngwọta na mmefu ego iji nwee ike imeziwanye ndị ahịa niile.
Kwe ka emee iwu sitere na nkeji 500, ndị a na-adabere na format, size na ọbụna customizing ha.
A na-ebuga igbe omenala ndị a n'ihe na-erughị otu ọnwa ozugbo akwadoro imewe ahụ.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-arụpụtakwa igbe nke àgwà dị iche iche, nha na ụdị ndị kwesịrị ekwesị maka mbupu mba na mba.
Nkwakọ ngwaahịa Sago
N'okwu a, onye na-eweta Spanish a abụghị nanị na-ere nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, ma ha na-ekpuchi usoro dum. Ya bụ, ị nwekwara ike chepụta prototype, ebe ha nwere ngalaba imewe yana igwe mbipụta dijitalụ; nakwa ime ka anwụ anwụ , guillotined , lined , manpurated and others.
Ha dị nnọọ mbara, nke na-enye ohere chọta ọtụtụ ọrụ dị iche iche yana igbe na akpa maka ngalaba dị iche iche, site na ihe na-esi ísì ụtọ, ngwaahịa gourmet, ahịa, wdg. Dabere na mkpa ha nwere, ha na-akwadebe mmefu ego, mana ha na-enwe ike izute ndị na-adịghị ahụkebe nke onye ahịa nwere ike ịrịọ maka mbipụta pụrụ iche, imecha na nkwakọ ngwaahịa.
Kedu ngwugwu kacha aga nke ọma na Spain
Obi abụọ adịghị ya na nkwakọ ngwaahịa bụ naanị mkpuchi nke ngwaahịa ndị a zụrụ. Mana nke ahụ apụtaghị na ịkwesighi ilekọta nkọwa ya. Na n'echiche a, ihe ndị a na-aga kwupụta onwe onye.
N'ezie, mgbe a na-enweta ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, ọ na-adọrọ uche anyị, ọbụnadị anyị na-echeta ya tupu ọbụna ụlọ ahịa ndị ọzọ. Igbe na-acha uhie uhie, rịbọn ọlaọcha, ma ọ bụ ọbụna nkwakọ ngwaahịa na-achọsi ike nwere ike ịdọta uche ndị ahịa na, na eCommerce, mụbaa ohere ha ga-azụta n'aka gị ọzọ.
Ihe ị ga-achọ mgbe ị na-enye iwu nkwakọ ngwaahịa
Mgbe anyị chọrọ iku ọrụ nke ndị na-ebubata nkwakọ ngwaahịa, enwere ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike inyere anyị aka:
Rịọ maka ozi site na ọtụtụ. Ọ ka mma ka ị ghara ịhọrọ nhọrọ mbụ ị chọtara mana ị ga-arịọ maka ntinye n'ọtụtụ n'ime ha. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike iji tụnyere, ọ bụghị naanị ọnụ ahịa, kamakwa nlebara anya, nnweta ngwaahịa, àgwà, wdg. Mgbe ụfọdụ, ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ntakịrị iji nweta ngwaahịa mbụ ma ọ bụ nweta ya nke ka mma.
Nye gị nhọrọ. Ọ bụrụgodị na i chepụta echiche, ị nwekwara ike ịnakwere echiche ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ịchọta ngwaahịa kacha mma, ikekwe n'ihi na ị maghị ya ma ọ bụ n'ihi na i cheghị ya echiche otú ị chọrọ.
Lelee ndị ahịa ha ndị ọzọ. Ndị niile na-eweta nkwakọ ngwaahịa arụkọla ọrụ ma ọ bụ soro ọtụtụ ụlọ ọrụ rụọ ọrụ. Ya mere, ị nwere ike lelee ndị ahịa ha. Nke a nwere ike inyere gị aka karịsịa ma ọ bụrụ na ngalaba nke ị na-arụ ọrụ abụghị nke a na-emekarị maka nkwakọ ngwaahịa, dị ka ngalaba ọgwụ ma ọ bụ ebe a na-eme achịcha.
Ugbu a ịmara ndị na-eweta nkwakọ ngwaahịa 5 kachasị elu, ọ bụrụ na ị nwere eCommerce ma ọ bụ mkpa ịzụta ngwugwu maka mbupu mba ma ọ bụ mba ụwa, ị maara ebe ị nwere ike ịga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Top 5 na-eweta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na Spain
Kedu ihe bụ CPM